RW Rooble oo safarkiisii ugu horreeyey uga amba-baxay dalka | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta RW Rooble oo safarkiisii ugu horreeyey uga amba-baxay dalka
RW Rooble oo safarkiisii ugu horreeyey uga amba-baxay dalka
Ra’iisul Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Maanta safarkiisii ugu horreeyay waxaa uu uga ambabaxay Magaalada muqdisho tan iyo markii la Magacaabay xilka, isaga oo kusii jeeda dalka Kuwait.
U jeedka safarka Ra’iisul Wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa uu yahay in uu ka qeyb-galo tacsida Amiirkii dalka Kuwait Sheekh Sabah ku geeriyooday dalka Mareykanka 29-kii Bishii September ee sanadkaan.
Maqaal horeMaxaa ka jira in AMISOM ay ka soo baxday deegaano ka tirsan Sh/Hoose?
Maqaal XigaVilla Soomaaliya oo war ka soo saartay safarka MW Farmaajo ee Eritrea+Sawirro
Magacyada golaha wasiirada cusub ee caawa uu ku dhawaaqay RW Rooble.
Xog:Warar Hordhaca ah Magacaabista Wasiirada Cusub
Xogta:-Gabadhii la sheegay in la Afduubtay oo la ogaaday inay Baxsad aheyd.
Xogta:-Gabadhii la sheegay in la Afduubtay oo la ogaaday inay Baxsad...